Properties for Sale in Dagon Myothit (South) - Yangon Region | iMyanmarHouse.com
Properties for Sale in Dagon Myothit (South)
မဂ်လာပါရှင့် 🙏 တောင်ဒဂုံ မြို့နယ် မောင်းမကန်လမ်းမကြီးပေါ်က နေရာလည်းကေ...
Phone No. To Contact 925 Real Estate
Ad Number S-10176437
တောင်ဒဂုံ၊ (၁၉)ရပ်ကွက်တွင် #အသင့်နေ အိပ်ခန်း(၂)ခန်းဖွဲ့ပြီး ပေ(၂၀ x ၆၀) လုံးချင်းတိုက်လေး...
အောင်ဆုပန်လမ်း၊ (၁၉)ရပ်ကွက်၊ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်။ မြိတ်လမ်းမကြီးကျောကပ် လှော်က...
1,550 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10163934
အေးဆေး လက်တင်နေထိုင်လို့ ရတဲ့ အိမ်လေး ရောင်းမည်
ခြံကျယ်ကျယ် ဆိတ်ဆိတ်ငြိမ်ငြိမ် လက...
7,500 Lakh (Kyats)
Phone No. To Contact ဆုံဆည်းရာ အိမ်ခြံမြေ
Ad Number S-10156885
ဆုံဆည်းရာ အိမ်ခြံမြေ Close
ဒဂုံတောင် ၅၅ရပ်ကွက် လုံးချင်းတိုက် အရောင်း
🍂 မ​နေ့ကမှ ပီးတဲ့ တိုက်သစ်​လေး 2လုံး နဲ့ မိတ်ဆက်...
Phone No. To Contact Baydar Real Estate
Ad Number S-10155727
ဒဂုံတောင် ၅၅ရပ်ကွက် အိမ်နဲ့ခြံအရောင်းလေးပါ
🍂🍂🍂 တထပ်တိုက်အိမ်သစ်​လေး ​ရောင်းပါမယ်ရှင်😊 💚 စျေးနှုန်း - သိန်း 800 ညှိန...
Ad Number S-10155713
ဘဏ်ချိတ်နဲ့ ၀ယ်လို့ရတာ​လေး လာပီရှင်🤩 #နေထိုင်ရင်းဝင်ငွေလည်းရနေမည့်တိုက်သစ်လ...
Ad Number S-10127556
55 ရပ်ကွက် အိမ်နှင့်ခြံအ​ရောင်း
*** သိန်း 800 ညှိနှိုင်း 🤩*** ဒဂုံ​​တောင် 55ရပ်ကွက် မ...
Ad Number S-10127531
Phone No. To Contact အာရှမြေ (Asia Land) အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီ 09-5041674, 01-8393173, 01-8394415.
Ad Number S-10175730
အာရှမြေ (Asia Land) အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် ကုမ္ပဏီ 09-5041674, 01-8393173, 01-8394415. Close
Ad Number S-10175504
950 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10174668
*** ေတာင္ဒဂံုၿမိဳံနယ္ (၁၈)ရပ္ကြက္ရွိ လံုးခ်င္းအိမ္ အေရာင္း ***
Phone No. To Contact ေဆြသဟာအိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္
Ad Number S-10174427
Ad Number S-10173150
0.80 Lakh (Kyats) (Price Per Sqrt Ft)
Ad Number S-10172249
🏠 တောင်ဒဂုံ (မြယမုံအိမ်ရာ) မြေကွက်နှင့် အိမ်အရောင်း 🏠
20,000 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10172228
Ad Number S-10171992
တောင်ဒဂုံထဲမှာ အရောင်းရှာနေကြတဲ့ မိတ်ဆွေတို့အတွက် အိမ်အရောင်းလေးတစ်လုံးနဲ့...
575 Lakh (Kyats)
Ad Number S-10171522